Apple Mitady Fankatoavana FCC amin'ny fitaovana Wireless | Vaovao IPhone
Izay fitaovana elektronika te hahatratra ny tsenan'i Amerika Avaratra dia tsy maintsy mandalo ny fibaikoan'ny Federal Communication Commission (FCC) Imbetsaka izahay no namoaka vaovao mifandraika amin'ny fitaovan'ny orinasa iray izay nandalo ny sivan'ity vatana ity na izay miandry ny hanaovana izany. Tamin'ny volana septambra lasa teo dia nangataka ity vatana mangatsiaka ity i Apple mba hanao fitsapana ilaina mba hamidy, fitaovana vita batemy ho A1844, ho isa maodely. Nahafantatra bebe kokoa momba ity fitaovana ity izahay, afa-tsy ny mamela ny fifandraisana Wireless NFC sy Bluetooth.
Mbola nanolotra fitaovana tsy misy tariby vaovao indray ry zalahy avy any Cupertino manolotra ny fifandraisana mitovy, NFC sy Bluetooth, ary ny isa laharana dia A1846, izay mety ho fanitsiana ny maodely natolony tamin'ny volana septambra tamin'ny taon-dasa. Tsy misy fitaovana Apple ankehitriny miaraka amina isa mitovy amin'izany. Ary koa, tsy misy sary izay afaka manaisotra antsika amin'ny fisalasalana momba ny mety ho fisian'ity fitaovana ity. Ny zavatra tokana azo eritreretina amin'ny mari-pamantarana vokatra dia ny fitaovana misy sisiny somary miolaka ary visy Torx roa.
voalohany novinavinaina fa mety ho maodely vaovao amin'ny Apple TV, saingy nariana haingana satria ny famaritana ny vokatra sy ny fanoratana FCC dia toa nanondro fa tsy vokatra hamidy izy io, fa fitaovana ampiasana anatiny ao amin'ny orinasa na azo inoana fa ilay iBeacon fanilo, izay natao ho an'ireo orinasa te-hampihatra azy ireo amin'ny toerany mba hanomezana vaovao momba ny vokatra rehefa manatona ny mpanjifa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple mitady FCC Fankatoavana ny fitaovana Wireless
Fampiharana maimaimpoana 8 na misy fihenam-bidy, mandritra ny fotoana voafetra (24 Janoary)